Yakakwira-Yemhando Imwe Use AV Fistula Tsono Seti Fekitori uye vagadziri | Sanxin
Kumwe Kushandisa AV Fistula Tsono Sets
Kushandisa kamwechete AV. Fistula Tsono Seti inoshandiswa nemacircuit eropa uye nehurongwa hwekugadzirisa ropa kutora ropa kubva mumuviri wemunhu uye kuendesa iro rakagadziriswa ropa kana zvikamu zveropa kudzokera kumuviri wemunhu. AV Fistula Needle Sets ave achishandiswa muzvipatara zvekumba nekune dzimwe nyika kwemakumi emakore. Icho chigadzirwa chakakura chinoshandiswa zvakanyanya nekiriniki institution yevarwere dialysis.
Kumwe kushandiswa kweAV Fistula Tsono Sets kunoshandiswa nemacircuit eropa uye nehurongwa hwekugadzirisa ropa kutora ropa kubva mumuviri wemunhu uye kuendesa iro rakagadziriswa ropa kana zvikamu zveropa kudzokera kumuviri wemunhu. AV Fistula Needle Sets ave achishandiswa muzvipatara zvekumba nekune dzimwe nyika kwemakumi emakore. Icho chigadzirwa chakakura chinoshandiswa zvakanyanya nekiriniki institution yevarwere dialysis.
◆ Ultra-yakatetepa yakapetwa yakapetwa yakapinza tsono inoderedza marwadzo uye kukuvara kwetishu.
Yakasarudzika inodzivirira chivharo chengetedzo chidziviriro kudzivirira iatrogenic kukuvara kune hukuru hukuru.
◆Iyo oval kumashure gomba uye inotenderera mapapiro dhizaini inogona kunyatsobatsira kugadzirisa kweyekuyerera kweropa uye kumanikidza, izvo zvinobatsira kugadzirisa iyo tsono kona uye kuona mhando ye dialysis. machubhu
◆ Silicone oiri inogadziriswa neyechipiri silicification. Tsono machubhu anoiswa mafuta neakasarudzika tekinoroji kumisikidza Kuona kupinza kwetsono yega yega, yakazara magnifier kuongorora kunoitwa
◆ Yakanaka uye yunifomu silicification kurapwa, yakanaka biocompatibility, inoderedza kubaya kuramba.
◆ Nemavara akasiyana, zviri nyore kuziva tsono modhi uye maratidziro
AV Fistula Tsono Inoisa mamodheru uye zvirevo
Rudzi rwakajairika: Bhuruu 15G, Green 16G, Yero 17G, Tsvuku 18G.
Yekuchengetedza mhando: Bhuruu 15G, Green 16G, Yero 17G, Tsvuku 18G.
Yakagadziriswa bapiro mhando: Bhuruu 15G, Green 16G, Yero 17G, Tsvuku 18G.
Rotation bapiro mhando: Bhuruu 15G, Green 16G, Yero 17G, Tsvuku 18G.
Pashure: Hemodialysis powder (yakabatana nemushini)
Zvadaro: Central venous catheter pack (ye dialysis)
Ropa Kubvisa uye Kuchenesa
Kuchenesa Ropa MuMuviri
Kuchenesa Ropa Kurapa
Tubing yakagadzirirwa hemodialysis
Zvishongedzo Tubing yeHDF
Mukoti kititi che dialysis